Iincwadi zolutsha, imeko elungileyo yoncwadi iyenyuka. | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Amabali, Ezahlukeneyo
Iincwadi zolutsha Ziyilelwe ukonwabisa abantu abancinci kwaye babafundise ngamacebo kunye nabalinganiswa abanokunxibelelana nabo. La mabali okwishumi elivisayo afumene iiyantlukwano ezininzi kule minyaka idlulileyo, kwaye okwangoku ayaziwa ncam ukuba iziza zitshintshile nezizukulwana, okanye ukuba izizukulwana zitshintshe iziza.
Inyani yile yokuba uncwadi lolutsha lube lolunye lweentlobo ezifunwayo kwimarike yoncwadi. Oku akuqhelekanga, kule minyaka idlulileyo umhlaba ubugcwele ngabafundi abancinci abanomdla abakhuthaze ababhali abakhulu. Singatsho ukuba le nto yaqala ngenkulungwane ye-XNUMX (xa ukufunda njengokuzonwabisa kwaba yinxalenye yobomi babaninzi) kwaye namhlanje sisiganeko sehlabathi. Intengiso ibanzi kangangokuba Yonke imihla kukho iindaba malunga nemisebenzi emitsha kunye nababhali.
1 Iincwadi zolutsha: iimpawu eziqhelekileyo
2 Iincwadi ezintathu zolutsha
2.1 INkosana yeMist
2.1.1 Malunga umbhali kunye iyelenqe
2.1.3 Uhlobo olungalindelekanga
2.2 Ubucukubhede bentliziyo
2.2.1 Malunga umbhali kunye iyelenqe
2.2.2 Ubomi bezithintelo
2.2.3 Ingxelo ebalaseleyo
2.3 NERVE, umdlalo ngaphandle kwemithetho
2.3.1 Malunga umbhali kunye iyelenqe
2.3.2 Ukuphulukana nolawulo lwenyani
2.3.3 Ihlabathi apho sibhencekileyo
Iincwadi zolutsha: iimpawu eziqhelekileyo
Into exhaphakileyo kula mabali licebo labo elinemigca, ngaphandle kotshintsho oluninzi lwengqondo kubuntu babalinganiswa.. Kodwa ngaphandle koku, indlela abanye ababhali abasongela ngayo indalo yabo kwezona zinto zintsonkothileyo yinto nje eyonwabisayo yomfundi. Iincwadi eziza kuboniswa apha ziphakathi ezona ncwadi zolutsha zibalaseleyo namhlanje.
Iincwadi ezintathu zolutsha
Malunga umbhali kunye iyelenqe
Ebhalwa yiSpanish uCarlos Ruiz Zafón kwaye yapapashwa ngo-1993, le ncwadana eyimfihlakalo ibalisa ibali likaMax Carver. Ungumfana oneminyaka eli-13 ubudala othe, ngenxa yemfazwe, wafuduka nosapho lwakhe baya kwidolophana encinci kunxweme lweAtlantic ngehlobo lowe-1943. , zombini zokoqobo nezikweko.
Kwimeko yakhe entsha uMax udibana noRoland kunye notatomkhulu wakhe uVictor Kray, injineli yokwakha indlu yesibane. Umlinganiswa ophambili uphila ixesha lokonwaba kakhulu nomhlobo wakhe omtsha, othi ekuhambeni kwexesha aqale ubudlelwane obuhle bothando nodade omdala kaMax, uAlicia. Iintsuku zimnandi elunxwemeni, ukuqubha, ukuntywila, ukuba ngabahlobo.
Kodwa ixesha elidlulileyo liza kubo ngendlela engalindelekanga kunye nomlingiswa ongu-diabolical ozibiza ngokuba nguDkt.. Okokugqibela sisidalwa esibonelela ngokunqwenela ngexabiso eliphezulu.
Iincwadi zolutsha: Inkosana yenkungu.
Umbhali uchaza useto lwenoveli ngendlela ekhethekileyo: Inkungu, umgcini omkhulu wolwandle weemfihlelo ezimangalisayo, iimuvi ezindala ezigcwele imiyalezo, imifanekiso eqingqiweyo eyoyikekayo ebomini ..., wonke umzuzu wokurhanela wenzeka phantsi kokukhanya kwendawo engafani nenye. Kwangokunjalo, umbhali unika ixabiso elikhethekileyo kubuhlobo, kwimemori nasekuhambeni kwexesha, kunye nokuphulukana nobumsulwa bobuntwana.
Yayibhalwe yimvumi yaseFrance, umbhali kunye nomvelisi uMathias Malzieu, kwaye yapapashwa ngo-2007, ecaleni kwealbhamu ye studio enegama elifanayo.
Le ncwadi isixelela ngeentetho zikaJack, inkwenkwana ezelwe "ngomhla obandayo kakhulu emhlabeni", e-Edinburgh. Ngenxa yeqabaka ngobusuku bokuzalwa kwakhe, uJack wazalwa enentliziyo ethe-ethe kangangokuba, ukumnceda ukubetha, umama wakhe owamkhulisayo, uGqirha Madeleine, wamenzela iwotshi yomthi njengentliziyo.
Nangona uJack esinda kungenelelo, kuya kufuneka abethe umoya wokubukela kwentliziyo yakhe ubomi bakhe bonke., kwaye ulandele imigaqo emithathu, ethi, ekuqaleni ibonakale ilula kakhulu: thintela iimvakalelo ezinamandla ngazo zonke iindleko, thintela ukuba nomsindo, kwaye, ngaphezu kwako konke, akuvumelekanga kwaphela ukuthandana.
Ngenxa yokoyika ukuba uJack angazonzakalisa ngaphandle ngenxa yentliziyo yakhe ethe-ethe, uMadeleine umgcina ekhaya kwiminyaka eli-10 yokuqala yobomi bakhe. Nangona kunjalo, xa kufika usuku lwakhe lokuzalwa lweshumi, ugqirha uyamvumela ukuba ahambe, kodwa hayi ngaphambi kokumkhumbuza ngemithetho eyilelwe ukumgcina ekhuselekile.
Iincwadi zolutsha: Ubucukubhede bentliziyo.
Ukushiya indlu encinci endulini apho wayehlala khona kude kube lelo xesha, uJack ujongene nelizwe liphela elinokubakho.. Lonke ivumba, wonke umbala kwindalo esingqongileyo ubonakala umhle kuye, kodwa hayi kakhulu ilizwi lemvumi encinci enamehlo amfutshane ayithandayo kwaye imenze aqalise uhambo oluyingozi lokufuna u-Miss Acacia omncinci.
Ukusekwa kule ncwadi ngumsebenzi opheleleyo wobugcisa. Abalinganiswa bayo abahlukileyo nabanemibala benza ibali lothando phakathi kukaJack omncinci kunye noMiss Acacia baphile ngohlobo lwentsomi kunye neentsomi zesayensi. Umzekeliso kwiphepha elingaphandle lencwadi ngumculi uBenjamin Lacombe. Eli gcisa lalinoxanduva lokuboniswa kwefilimu esekwe kwinoveli, ekhutshwe ngo-2014.
UMSINDO, umdlalo ngaphandle kwemithetho
Ibhalwe nguJeanne Ryan, le noveli yolutsha yeetekhnoloji yetekhnoloji epapashwe ngonyaka we-2016. Umsebenzi uxela ibali lomfundi oselula oneentloni kumabanga aphakamileyo ogama lingu "Vee". Ukudinwa kukuziva ungabonakali, uthatha isigqibo sokuthatha inxaxheba kumdlalo ongaphantsi komhlaba wemiceli mngeni osasazeke kwi-Intanethi apho, kumceli mngeni ngamnye, anokufumana amabhaso amangalisayo.
Kuqala imiceli mngeni iba neentloni ngandlela ithile kuluntu ophambili. Kodwa, njengoko uphakamisa amanqanaba, ufumanisa ukuba umdlalo uyazi izinto ezizezakho ngobomi bakho. Nangona kunjalo, le ntokazi ifuna ukuba notoriity ngakumbi kunye nabahlobo bayo, kwaye igqibe kwelokuba iqhubeke.
Ukuphulukana nolawulo lwenyani
"UVee" ubhangqiwe kumdlalo kunye nomfana ogama linguIan, omcenga ukuba abe nesibindi kwaye ayigqibe imiceli mngeni.. Kodwa kungekudala izinto ziphume esandleni kwaye umceli mngeni ngamnye uyingozi kuneyokugqibela.
Iincwadi zobuntwana: Intliziyo.
Njengokuba umngcipheko usanda, imivuzo iyenyuka. Oku kwenza ukuba umlinganiswa ophambili acinge ukuba kufanelekile ukubandezeleka ngakumbi ukufezekisa eyona nto ayinqwenelayo. Nangona kunjalo, ngaba kufanelekile ukubeka ubomi bakho kunye nabahlobo bakho abasenyongweni engozini ukuze uphumelele? yinto ekufuneka ifunyenwe ngu "Vee".
Ihlabathi apho sibhencekileyo
Iseti yale ncwadi ikhokelela umfundi ukuba acinge ukuba kulula kangakanani kumntu ongamaziyo ukuba azi yonke into ngaye nabani na. Konke oku kunokwenzeka ngenxa yendlela abantu bakarhulumente abavela ngayo kwimidiya yoluntu kunye nokubhloga kwi-Intanethi. Lonke ulwazi lukhona, kwaye umdlalo uyingozi njenge UMSINDO Uyayazi indlela yokusebenzisa eli thuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezintathu zolutsha kunye noseto lwazo oluhle